दुःखद खबर; अस्ट्रियामा एक नेपाली महिलाले आफ्नै ३ नाबालक सन्तानको ज्या’न लि’इन्! – Dainik Sangalo
October 18, 2020 494
काठमाडौ । अस्ट्रियामा बस्दै आएकी एक नेपाली महिलाले आफ्नै साना ३ सन्तानको ज्या’न लि’एकी छन् । उनक श्रीमान् पनि भियनामा बस्ने गरेका छन् । तर केही समय देखि श्रीमान् श्रीमति अलग्गै बस्ने गरेका थिए ।
श्रीमान् भियनामा बस्न थालेपछि तीन छोराछोरीसंगै बस्दै आएकी एक नेपाली महिलाले आफ्ना ससाना तीन छोराछोरीको ज्या’न लि’एकी हुन् । उनको जेठी छोरीलाई जि’वि’तै फे’ला पारेपछि घटनावारे खु’लेको हो । तर ति छोरीको पनि उपचारको क्रममा नि’धन भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अस्ट्रियाको भियना निवासी ती ३१ वर्षीया महिलाले शनिबार बिहान ८ महिनाका छोरा, ३ वर्ष र ९ वर्षका दुई छोरीको ज्या’न लि’एकी हुन् । घटनाको कारण अहिले सम्म खुल्न नसकेको र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ ।
जेठी छोरीलाई अस्पताल लगिए पनि उनलाई पनि चिकित्सकले बचा’उन सकेनन् । ती महिलालाई प’क्राउ गरी घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ती महिला गुल्मी स्थायी घर भई पछिल्लो समय बुटवल बस्ने गरेको र त्यसपछि अस्ट्रिया गएको बताइ पनि उनको नाम सार्वजनिक भइसकेको छैन । उनका पति पनि भियनामै बस्छन तर उनीहरूबीच झ ग डा भएकाले अलग बस्ने गरेका थिए ।
Prevसीटभरि यात्रु राखेर बढी भाडा असुल्दै सार्वजनिक यातायात
Nextभोलिदेखि सबै बन्द ! (सूचनासहित)
रबि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेल बाकसमा फालेको नानी कहाँ पुगीन्, के अरुलाई बच्चा पाल्न दिन्छन् त ?
अब प्रधानमन्त्री बालुवाटारबाट उडेरै एयरपोर्ट जान सक्ने, बन्यो हेलिप्याड